Shiinaha Sanduuqa Ubaxa adag ee dib loo cusbooneysiin karo ee loo yaqaan 'Rose Reinclaboard Paper Flower Box' oo loogu talagalay soo saaraha iyo alaab-qeybiye saaxiibtiis | Huaguang
Kaarboor adag oo waraaqo ubax ah oo dib loo cusbooneysiin karo loogu talagalay saaxiibtiis
Waxaa jira qaabab badan oo ubaxyo ah, waxaan siin doonaa dad kala duwan iyadoo loo eegayo noocyo kala duwan, muujiyaan macno kala duwan. Xitaa haddii fahamka ubaxyadu uusan ahayn mid qoto dheer, dadka casriga ahi asal ahaan way ogyihiin inay ubax diraan kuwa jecel, carnations odayaasha, iyo ubaxyada asxaabta. Waxaa jira bouquet, dambiisha gacanta, dambiilaha shelf, baakadaha sanduuqa ubaxa, mid kasta wuxuu leeyahay door iyo saameyn kala duwan.
Tusaale ahaan, kiiskeyga, waxaan jeclaan lahaa inaan helo ubax ubax maalinta Jacaylka, oo ah mid aad u weyn, gaar ahaan indhaha soo jiidashada oo kalsooni kor u qaaday. Kuwa hadiyado siiya hogaamiyaasha iyo odayaasha waxay inta badan xambaari doonaan dambiilo ubax iyo sanaadiiq ubax si ay u muujiyaan ixtiraam iyo iswaafajin xaaladooda. Mararka qaar, qofka qaata ubaxa shaqsiyadiisa waa mid xishood badan, hooseeya ama jawiga uusan ku habboonayn xayeysiin aad u badan ayaa u diri kara ubax ubax.
Waqtigaan la joogo, sanduuqyada ubaxa ayaa caan ku ah seddex sababood.
1: ilaali ubaxyada waxyeello maheleyso, si ubaxyadu wali xaaladdooda ufiicanyihiin marka lasoo diro.
2: furaha hoose, banaanka si toos ah uma arki karo inuu, badbaadin karo dhib iyo dood aan loo baahnayn.
3: Dhamaad sare, ubaxyada ay soo direen sanduuqa hadiyadaha ayaa runtii aad iyo aad uga sareeya dhamaadka bouquet-ka iyo dambiilaha, taas oo ka dhigaysa in bouquet-ka oo dhami uu yahay mid tayo sare leh.
Badanaa ilaa maalinta muhiimka ah, martida kaladuwan ee martida dukaan socodka ah ee aan dhamaadka lahayn, waxay doortaan ubaxyo siinta dadkooda muhiimka ah.
Waxaa jira seddex nooc oo hadiyado ah: sanduuqa hadiyadaha laba jibbaaran, sanduuqa hadiyadaha ee leydika, sanduuqa hadiyadaha iyo wadnaha. Ubaxyada sanduuqa hadiyadaha ubaxyada, ubaxyada sanduuqa hadiyadaha ubax ee ku habboon hoggaamiyeyaasha, odayaasha, iwm si loo muujiyo muhiimadda ay u leeyihiin iyaga. Sanduuqa hadiyadaha lakabka laba-geesoodka ah kahor ubaxa dabka gaar ahaaneed, labada lakab ee kore iyo hoose waxay leeyihiin khaanado, lakabka aadka ufiican waa ubaxyo cusub. Lakabka wanaagsan ayaa ah in la dhigo hadiyadda, lipstick, silsilad iyo wixii la mid ah. Dad badan waxay bilaabeen inay ku daydaan ubaxa sanduuqa hadiyadaha laba-jibbaaran, si toos ah internetka, kaliya saaxiibtiis ayaa heshay lakab midab qalaad ah oo ubax been abuur ah, yaab ayaa isku badalay naxdin.
Maalinta Jacaylka ayaa caan ka ah waa ubaxa sanduuqa hadiyadaha wadnaha u eg, muuqaalka jacaylku waa ka jaceyl badan yahay waana mid gaar ah, waxaa jira qaansad qurux badan, dadka ha u gargaari karin laakiin qiyaasi karo quruxda gudaha ku jirta. Ubaxyada qaabeeya wadnaha iyana qaali maahan. Waxay la mid yihiin sida ubaxa qaabeeya laba jibbaaran, laakiin ka qurux badan.
Hore: kartoon khafiif ah sanduuqa keydka warqadda lagu keydiyo ee dharka hoose
Xiga: dabool sanduuqa sanduuqa qafisyada jiingado jiingado